DEG DEG: Kooxda Tottenham Hotspur oo cayrisay Tababare Jose Mourinho – Gool FM
Man United oo sare u qaadday dalabkii ay ka gudbisay Jadon Sancho & xiddiga ay dooneyso inay usoo qaadato baddelkiisa haddii ay ku guuldarreysato saxiixiisa oo la ogaaday
Kulammada Group A ee tartanka Euro 2020 oo caawa lasoo af-meeri doono… (Waa sidee rajada xulalka Wales, Switzerland & Turkey?)
Xulalka Spain iyo Poland oo is mari waayay kulan ka tirsanaa koobka EURO 2020… + SAWIRRO
Xulka qaranka Germany oo guul ka gaaray dhigiisa Portugal kulan ka tirsanaa koobka EURO 2020… + SAWIRRO
RASMI: Kooxda Barcelona oo ku dhawaaqday saxiixa Memphis Depay
Shaxda rasmiga ah kulanka adag ee xulalka Germany iyo Portugal oo la shaaciyey
DEG DEG: Kooxda Tottenham Hotspur oo cayrisay Tababare Jose Mourinho
Haaruun April 19, 2021
(London) 19 Abriil 2021. Kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa shaqada ka cayrisay Tababaraheedii Jose Mourinho sida ay ku dhawaaqday Spurs goordhow.
Saacado kaddib markii kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ay ku dhawaaqday inay ku biirtay qorshaha horyaalka cusub ee European Super League.
58-sano jirkaan ayaa shaqada Spurs hayey tan iyo bishii November ee sanadkii 2019-kii kaddib markii uu shaqadaas ka beddelay Mauricio Pochettino.
Macallinka reer Portugal ayaa heshiiskisia uu kula jiray kooxda ka dhisan Waqooyiga London waxa uu soconayey illaa dhammaadka xilli ciyareedkan 2023.
Markii uu Mourinho qabtay shaqada Spurs, kooxdu waxay ku jirtay kaalinta 14-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, laakiin wuxuu ku hoggaamiyay iyaga kaalinta lixaad si ay u xaqiijiyaan u soo bixitaanka Europa League.
Kooxda Spurs ayaa bayaan ay soo saartay oo ay ku daabacday website-keeda waxa ay ku shaacisay in Jose Mourinho iyo waaxdiisa shaqada ee kala ah Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin iyo Giovanni Cerra inay shaqada ka direen, isla markaana kooxda uu sii wadi doonto maanta Ryan Mason.
Kooxda PSG oo maanta meel cidlo ah ka qaadan karta Champions League & Waxa laga yeelayo Europa League
Manchester United oo isaga baxday Ururka Kooxaha Yurub & Ed Woodward oo iska casilay xilkii uu ka hayey UEFA